ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 8/1/08 - 9/1/08
မောင်ဒယ်ဂဲလ်.. လေးတွေကိုရိုက်ရတာတော့ ..ဟုတ်ဘူး..
တခါတခါ..ဓာတ်ပြတ်တယ်.. မြင်ကွင်းကလည်းတနေ့တနေ့ ဒါပဲလေ။ အော်... အလုပ်..အလုပ်..... သဘောင်္ကျင်းအလုပ်.. ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့လည်း ပျင်းတယ်.. လုပ်စရာရှိပြန်တော့လည်း..ယားလို့တောင်ကုတ်ကြားမရဘူး သံတုန်း..သံပြားနဲ့.. နှစ်ပါးသွားနေရတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တောင်..ထောင့်တွေကပဲ ရွေးရွေး ပြီး ရိုက်တာများတော့.. အကျင့်ပါနေပြီ..လူပုံတောင်မရိုက်တတ်တော့ဘူကောင်မလေးကတော့.. ငြိုငြင်တော့မှာပဲ.. ဘ၀.. ဘ၀.. ဒီလိုပဲ..
DatE Friday, August 29, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက လိပ်မိသားစုတစ်စုဟာ ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ သဘာဝကိုက နှေးကွေးတဲ့လိပ်တွေဟာ ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတာ..၇ နှစ်တောင်ကြာ ပါသတဲ့.. စားစရာသောက်စရာတွေ စုမိတော့ လိပ်မိသားစုဟာ အိမ်ကထွက်လာပြီး သင့်တော် တဲ့ နေရာကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ ၂ နှစ်အကြာမှာ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုကို ရှာတွေ့သွား ကြပါတယ်။
အဲဒီနေရာလေးမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတို့ ပျော်ပွဲစားအတွက် စားစရာ သောက်စရာတွေ ခြင်းတောင်းထဲကထုတ်ပြီး ပြင်ဆင်ကြတာ တို့ကို ၆ လ အကြာမှာ ပြီးဆီးသွားကြပါတယ်။
အင်း..အဲဒီအခါကြမှ ဆားမေ့ကျန်ခဲ့တာကိုသိလိုက်ရပါတယ်တဲ့။ ဆားမပါတဲ့ပျော်ပွဲစားဟာ ဘယ် လိုမှ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူ လို့အားလုံးက ထင်ကြတယ်။ ဒီကိစ္စ ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင် ကြပြီး သူတို့ထဲမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး သွက်လက်သန်မာတဲ့ လိပ်ကို တာဝန်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီလိပ်ကလေးဟာ မိသားစု အလယ်မှာ လှိမ့်ပိန့်ပြီး ငိုယိုပါတော့တယ်။ နောက်တော့လည်း အားလုံးကတောင်းဆိုတာကြောင့် ကတိတစ်ခုတောင်းပြီး သွားမယ်လို့ သဘောတူပါတယ်။
သူတောင်းတဲ့ကတိကတော့ ဘယ်သူမှ သူပြန်မရောက်မချင်း အစားအသောက်တွေ မစားပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိပါပဲ။ တစ်မိသားစုလုံးကသဘောတူလိုက်တော့မှ လိပ်ကလေး ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ သုံးနှစ်ကြာတဲ့အထိလိပ်ကလေးပြန်ရောက်မလာပါဘူ။ လေးနှစ်.. ငါးနှစ်..ခြောက်နှစ်… ခုနှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ အသက်အကြီးဆုံးလိပ်က ဗိုက်ဆာတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ရှာတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် သူစားတော့မယ်လို့ပြောပြီး အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို ဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ.. လိပ်ကလေးဟာ သစ်ပင်နောက်နားကနေ ရုတ်တရက်ထွက်လားပြီး အော်ပြော လိုက်ပါတယ်။
တွေ့လား!! သားကိုစောင့်ကြမှာ မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာ သိသားပဲ။ တော်ပြီ… သွားမယူ တော့ဘူး……. ။ ။ ။
** လူတစ်ချို့ဟာ အခြားသူတွေကို ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို လုပ်ပေးဖို့ စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းပစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူများတွေ ဘာလုပ်သလဲ ဆိုတာကို အလေးထား စိတ်ဝင်စားနေရတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်အတွက်တောင်ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ကြဘူး **
DatE Friday, August 29, 2008 LaveL စိတ်အဟာရ0comments link this
ကျနော် MBS အဖွဲ့ဝင်....
Mbs ကို..မန်ဘာဝင်ကတည်းက..ကိုယ့်ဘလော့လို့သဘောထားပါ တယ်.. ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းလို့လည်းသဘောထားတာပါ.. ဘယ်သူမှ မဖိတ်ခေါ်ပဲေ၇ာက်လာခဲ့တာပါ.. စရောက်စက မန်ဘာ ၂၀၀ ၀န်းကျင် လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်… ခုဆို ၆၀၀ ကျော်လာပြီ.. ကျွှန်တော် နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါ တော်တော်များများပေါ့ တွေ့ဖူးပြီး ပါပြီ.. ဘာလို့နာမည်ကြီးတာလည်း.. အများအကျိူးသယ်ပိုးလို့.. စေတနာထားကြလို့.. ဒီ mbs မှာ နာမည်ရ အများကျိုးဆောင် ဘလော့ဂါတွေများသလောက်.. လေးနက်တဲ့အတွေးနဲ တွေနဲ့.. တိုင် ပင်ဆွေးနွေး ကြတာလည်းရှိပါတယ်…. လက်လှမ်းမှီရာကို ဆွေးနွေး ဖြစ်ပါတယ်..၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ပညာရှာရတာကိုလည်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရခြင်းအတွက်..ဂုဏ်ယူမိပါတယ်..
မနက်က..မနေတတ်တော့.. ၀င်ငြင်းမိတယ်.. မိန်မ နဲ့ ယောင်္ကျား ဘယ်သူမြတ်သလဲတဲ့..ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ၀င်ပြောမိပါတယ်.. အမှန်တကယ်က..စကားစဲစေခြင်တာရယ်.. အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီး ငြင်းနေကြတာ.. မဖြစ်စေခြင်တာရယ် .. ၀င်ပြောမိတယ် ။ ငယ်ငယ်က အက္ခရာ က ကြီးကို.. သူငယ်ချင်နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ကြည့် ပြီး ကကြီးကွ.. ယပက်လက်ကွ… ငြင်းနေသလို ရှင်းတာကိုရှုပ်အောင် လုပ်ပြီး ခေါင်းစဉ်ထူပြီး ပြောနေကြတာ မကောင်းပါဘူး .. ၀င်ပြောမိတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် လည်း ဒေါကန်မိပါတယ်.. MBS မှာ …ဘလော့အတုလုပ်ပြီးမန်ဘာဝင်တာတွေကို..လုံးဝမကြိုက် ပါဘူး..
DatE Wednesday, August 27, 2008 LaveL personal0comments link this
စင်္ကပူ သဘောင်္ကျင်း အလုပ်သမား ဘ၀
သဘောင်္ကျင်းကို.. လမ်းမှားပြီးရောက်လာတယ်. ငယ်ငယ်က..ပေခဲ့တေခံတာလည်းတာပေါ့. ပညာကိုလေ့လာရကောင်မှန်း မသိတာလေ… တစ်လကို ငွေလေး လေးငါး သိန်း လောက်ရဖို့ အရေး.. မနက် ငါးနာရီခွဲ ထရ.. ညနေ ခြောက်နာရီခွဲထိ လုပ်ရတယ်… အိုတီ ဆိုတာကလည်း ဆယ်တစ်နာရီထိ တခါခါလုပ်ရသေး .. ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ.. စနေ၊ တနင်္ဂနွေလဲ မနားရဘူးလေ..
စင်ကာပူရောက်ပါတယ် တကယ် ကျွန်မှ ကျွန် အစစ်ပဲ…
ဒီကြားထဲမှာ အန္ဒိယကလားရယ် ဘင်္ဂလားကလား ရယ် က ကြီးစိုးသေးတယ်…
တရုတ်ကြီးက လဲ… နေရာတကာ…ဗိုလ်ကျ … မလေးတရုတ်က စိတ်ဓာတ် ရုတ်ညံ့တယ်… အလုပ်သမားခြင်းတူတူ တောင်….မြန်မာ ကဘာကြောင့်များ အောက်ကျရပါလိမ့်…… သိတော့သိ တယ် မပြောတော့ဘူး……
အလုပ်ထဲမှာလား.. ပြောကို မပြောခြင်ပါဘူ.. ဒါပေမယ့် ပြောရဦးမယ်..
သဘောင်္အဟောင်းတွေပြင်ကြတာလေ.. ဆီသဘောင်္တွေ၊ ဂတ်စ်သဘောင်္တွေ… ကားသဘောင်္တွေ.. အဆုတ် တွေ စုံလို့ပဲ။ သဘောင်္တစ်စီးလုံးကို သံပြားတွေနဲ့ လုပ်ထားတာ…
သံပြားကို ဂတ်စ်နဲ့ ဖြတ်ကြတယ်… ဘာပြောကောင်းမလဲ.. ညှော်ဆော်နံလိုက်တာ…
ဆီဟောင်းဆော်နံ.. မီးလောင်မှာကကြောက်ရသေး.. အင်း..မလွယ်ဘူး..
ကျွန်တော်တို့ အညာသားအတွက် အရမ်းကြီး အထူးခြားပါဘူး.. ရန်ကုန်က လူငယ်လေးတွေ..
DatE Saturday, August 16, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ကော်ပီ ပေ့စ်လုပ်မှရတယ် ဒီလိုပဲတင်နေရတယ် ။ ဘာလို့လည်း.......မသိ။
DatE Saturday, August 16, 20080comments link this
I went to Keppel Tuas Yesterday !!!
DatE Wednesday, August 06, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this